नेपालको नक्साका आठ ऐतिहासिक र प्रमाणित आधार – Yug Aahwan Daily
नेपालको नक्साका आठ ऐतिहासिक र प्रमाणित आधार
युग संवाददाता । ८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १०:०३ मा प्रकाशित
भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि ऐतिहाँसिक कागजपत्र मात्र होइन, १३२ वटा नक्सासमेत संकलन गर्नुभएको छ । यसक्रममा उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र त्यसको पूरक सन्धीदेखि यताका सबै कागजपत्रहरु संकलन गरिएको छ ।
अहिले मन्त्री अर्याल आफूसँग लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर भारतसँगमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत जमेर पुष्टि गर्न सक्ने कागजपत्रको ढड्डा रहेको बताउँनुहुन्छ । भावनामा बगेर लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्नु र प्रमाण पु¥याउनु फरक कुरा थिए । दुई देशको सीमाजस्तो संवेदशील विषयमा कुनै एउटा मात्र आधार र प्रमाण नपुग्दा पनि मुलुकको हात तल पर्छ भन्ने बुझेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि आफ्नो नेता भएकाले ऐतिहाँसिक दस्तावेज संकलनमा मन्त्री अर्यालले सबैतिरबाट साथ सहयोग पाउनुभएको थियो ।
मन्त्री अर्यालले निकालेको निश्कर्ष अनुसार लिम्पियाधुरालाई सन् १८५६ को नक्सामै छुटाइएको रहेछ । त्यसयताका कुनै नक्सामा लिम्पियाधुरा देखिन्छ भने कुनैमा देखिन्न । यसको कारण, त्यसबेला नेपालमा नक्सा छापिँदैनथ्यो । नेपालको नक्सा पनि ब्रिटिश–भारतले नै छापेको हुनाले लिम्पियाधुराको कडी डेढ सय वर्षअघि नै टुटेको हो । नेपालले आफ्नो नक्सा आफैं छापेको वि.सं. २०३२ मा हो, जुन नक्सामा लिम्पियाधुरा छुटाइएको छ ।
सन् १८५६ पछि प्रकाशित कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालमा देखाइएन । यद्यपि सन् १८५७ मा कुटी, नाभी र छाङरु स्पष्टरुपमा नेपालको देखिने गरी लिम्पियाधुरातर्फको नदीलाई काली नदी मानिएको छ । सो वर्षको दस्तावेजमा काली नदीबाटै नेपाल भारत सीमाना छुट्याइएको छ । तर, पछि भारतले सहायक नदीलाई काली नदी मानेर अर्घेलो निकालेको मन्त्री अर्यालको निश्कर्ष छ ।
मन्त्री अर्यालले लिम्पियाधुरा पुनः नेपालको नक्सामा समेट्नका लागि जुन कागजपत्रहरुलाई आधार बनाउनुभएको छ, अब नेपालले भारतसँग वार्ताको टेबुलमा बस्दा राख्ने आधारहरु तिनै हुन् । मुख्यतः आठवटा प्रमाण नेपालसँग छन्, जसका आधारमा लिम्पियाधुरा नेपालकै थियो र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
मन्त्री अर्यालले संकलन गरेका ८ वटा आधार यी हुन
५ः वि.सं. २०१८ को जनगणना
६ः वि.सं. २०१५ को मतदाता नामावली
यहाँनिर कति पाठकहरुलाई जिज्ञास हुन सक्छ, सन् १८१६ को पूरक सन्धी के हो ? नेपाल र ब्रिटिश भारतबीचको लडाइमा नेपाली पक्षले क्षति भोग्दै गएपछि भारतको सुगौली भन्ने ठाउँमा सन् १८१६ मार्चमा एउटा सन्धी भयो । जसमा नेपालबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेर नेपालको सिमाना पश्चिममा काली र पूर्वमा मेची कायम गरियो । तर, त्यो सन्धीअनुसारको नक्सामा राप्तीपूर्व कोशी नदीसम्मका तराईका जिल्ला नेपालमा समेटिएका रहेनछन् । त्यसपछि नेपालले सन्धी सच्याउन आग्रह गरेको थियो ।
सोहीअनुसार त्यसै वर्षको डिसेम्बर महिनामा अर्थात ९ महिनापछि सुगौली सन्धीको पूरक सन्धी भयो नेपाल र ब्रिटिस–इण्डियाबीच । सो सन्धीमा कोशीदेखि राप्तीसम्मको समथर भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न अंग्रेज सरकार इच्छुक रहेको भनी लेखियो र नेपालले अहिलेका मोरङदेखि दाङसम्मका भूभाग पूरक सन्धीमार्फत नेपालको नक्सामा पारेको थियो । बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरचाहिँ जंगबहादुरले लखनउ लुट मच्चाएर अंग्रेज खुशी पारेवापत नेपालको नक्सामा फिर्ता भएका हुन् ।
यी सबै ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र अन्य तिरोलगायतका रसिदहरु संकलन गरेपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र नेकपाका कतिपय नेताहरुलाई राखेर प्रण गर्नुभएको थियो । अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन सकिएन भने कहिल्यै हुन्न, त्यसैले पहिलो चरण नक्सामा समेटेर सुगौली सन्धीलाई सार्थकता प्रदान गर्छु । (अनलाइन खबरबाट साभार)
याे पढ्नुहाेस :
नेपालको नयाँ नक्सा भारतले अस्विकार गर्याे